Igbe ntụ use na More More withre rizọ na igbe akpịrịkpa-mkpọda igbe.
Igbe werre Drawer Box na rịbọn
Igbe ngwaọrụ nwere ụfụfụ n'ime
Ishchọrọ ịchọta ihe kachasị amasị gị ugbu a maka onye gị pụrụ iche ma ị chọghị idobe ya? Nweta igbe a na-adọta òké na rịbọn nke dị mfe iji ma nwee windo na-ahụ anya iji mee ka ị nweta ugbu a. Ihe mpe mpe akwa ahụ n’akụkụ igbe ahụ na-enyere aka wepụta ugbu a n’ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji jikwaa. Igbe ngwaọrụ nwere ụfụfụ dị n'ime yana nchekwa maka ngwaahịa elektrọnik. Eithers ọ bụ onye na-ehicha ntutu, ịgbatị ntutu, ụlọ akụ ike ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ, igbe ahụ ga-ahụ na nchekwa ya. Igbe igbe a na-adọka ma dịkwa obosara iji zuru ike ịnabata onyinye gị ugbu a. Ejiri agba ọcha na njiri mara na okirikiri ka emebere iji nye igbe nkwakọ, ihe mara mma.
A na-eji igbe a na-adọba igbe a ma ọ bụ rịbọn rụọ ọrụ nke ọma iji mee ka ọ bụrụ igbe nkwakọ ngwaahịa kachasị mma maka ngwaọrụ ụlọ ahịa. Onwe ha na ichoro.
Igbe mpempe akwụkwọ eji eme ihe na rịbọn nwere ụzọ kachasị mma iji kọwaa ịma mma ya. N'iji adọta nke ngwaọrụ dị n'ime, igbe ahụ na-eme onwe ya ka ọ bụrụ onye zuru oke ka ejiri gosipụta ya maka ndị ahịa ma ọ bụrụ na echekwa ya n'ụlọ ahịa. Designkpụrụ na-enweghị ntụpọ na ngwugwu echekwara bụ naanị ole na ole ọtụtụ uru igbe igbe a na-enye. Ither chọrọ igosi ndị ahịa gị ngwaahịa gị ka ọ dị mma ma ọ bụ chọọ ịkọwapụta ihe dị ugbu a n'ime igbe a, igbe a na-eburu ya ụzọ kachasị mma. I nwekwara ike ịrịọ maka nhazi onwe gị. Ndị otu anyị ga-ahụ na ị ga-enweta ihe ikwuru n’oge.